मनिष र मलिनामध्ये कसलाई को फापेनन् ? – Mero Film
मनिष र मलिनामध्ये कसलाई को फापेनन् ?
२०७५ असार २१ गते १६:२५
पुराना अभिनेता शिव श्रेष्ठका दाइका छोरा मनिष श्रेष्ठले ‘रानी’ र ‘तिमी हुन्छौ जहाँ जहाँ’मा काम गरे । मनिष ह्यान्डसम छन् । उनको चकलेटी फेसले यूवतीलाई भुतुक्कै पनि बनाउला । तर, मनिषको डेब्यू फिल्म र रिलिज भएको दोश्रो फिल्म दुबै पत्तासाप भएका छन् ।
मनिषका दुई वटा फिल्म नै पत्तासाप भएपछि उनलाई अब अप्ठ्यारो छ । अभिनेता शिव श्रेष्ठले आफूले बनाएको एउटा यस्तो प्रेम कहानी फिल्ममा छोरा शक्ति श्रेष्ठलाई डेब्यू गराउँदा मनिषलाई सानो भूमिकामा पनि देखाउन चाहेनन् ।
मनिषले काम गरेका दुई सिनेमा हिरोइन मलिना जोशी छिन् । मलिना जोशी र मनिषलाई राखेर रानी र तिमी हुन्छौ जहाँ जहाँ बनाएका निर्माता डुबे । दुबै सिनेमा डुब्दा मनिष र मलिनाको फिल्मी गन्तव्य पनि डुब्न लागेको छ ।
सिधै भनौ न, मनिष र मलिनाको जोडीलाई दर्शकले नाक खुम्चाइदिए । आखिर, मनिषका लागि मलिना वा मलिनाका लागि मनिषमध्ये कसलाई को नफापेको होला ?